Dowladda Iceland oo dib ugu celin doonta dalka Norway dhibane Bio Injineer Mahad Abiib. – Xeernews24
Dowladda Iceland oo dib ugu celin doonta dalka Norway dhibane Bio Injineer Mahad Abiib.
19. April 2018 /in WARAR/NEWS /von admin
Muwaadinka soomaaliyeed Mahad Mahamud ee dhibka ba`an kasoo gaadhay sharcigii ay dowladda Norway kala laabatay sannadkii hore islamarkaana isaga haajiray dalka Norway dokumenti la` aan iskana dhiibay dalka Iceland ayaa iminka dib loogu soo celinayaa dalka Norway sababo la xidhiidha dowladda Iceland oo sharciga u diiday.
Mahad ayaa warbaahinta TV2 ee dalka Norway u sheegay in diidmada sharciga Iceland loogu cuskaday heshiiskii qoxootiga ee lagu gaadhay magaalada Dublin kaas oo dhigaya in ruuxa magangalyo doonka ah uu xaq ku leeyahay dalka uu marka ugu horreysa iska dhiibo.
” – Aad ayaan uga xumahay, waxaana meel iska dhigay iminka aaminsanaanta ah in ay caddaalad iyo xuquuq ka jirto adduunka, sababtoo ah ma garanayo waxa la iigu cuskaday sharcigan oo soo baxay ka gadaal markaan Norway galay”, ayuu yidhi dhibane Mahad.
Dhibane Mahad oo safar doon ah uga haajiray dalka Norway ayaa qorshihiisa waxa uu ahaa in uu galo dalka Canada, balse waxaa uu iska dhiibay dalka Iceland oo aan sidaa uga fogeyn Norway.
Mahad oo dalka Norway ku noolaa mudo 17 sano ah islamarkaana noloshiisa halkaasi ku dhistay ayaa waxaa nolosha ka bur-buriyay shakhsiyaad sida uu sheegay ka xumaaday hammigiisa ah u ololeynta midnimo soomaaliyeed kuwaas oo ka been abuurtay halka uu kasoo jeedo asal ahaan islamarkaana u sheegay dowladda Norway in uu u dhashay dalka Jabuuti.
Dood-dheer iyo maxkamado ay isla koreen dowladda Norway ayaa waxaa Mahad lagala noqday sharciga, sidaasna ay nolosha dalka Norway uga bur-burtay.
Mahad ayaa baaqyo kala duwan oo uu u diray dowladda Norway iyo tan Soomaaliya ku codsaday in dalka Soomaaliya dib loogu celiyo, balse wali lama hayo cid codsigiisaas u tixgelisay.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/09/Hol.jpg 190 266 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-04-19 22:19:302018-04-19 22:20:31Dowladda Iceland oo dib ugu celin doonta dalka Norway dhibane Bio Injineer Mahad Abiib.
R/Wasaaraha Ethiopia oo Golahiisa Wasiirada ku dhawaaqay Nin Oramo ahna u magacaabay... Deg Deg: Mudaaharaad Ka Dhacay gobalka Sitti & shacabka oo Maxaabiis Xoog...